MAHADSANIDIIN: Ajay Devgan & Director Rohi Shetty Oo U Mahadceliyeen Qof Walba Oo Taageeray Filimka Golmaal Again & Wacdaraha Uu Sameeyey Filimkaan.
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Monday, 13 Nov 2017 14:00 PM / No Comments
Filimka Golmaal Again oo bilowga October shaashadaha aduunka la saaray ayaa gaaray meel xasaasi ah waxaana uu noqday mid kamid ah filimaanta ugu saameynta badan ee la daawaday.
Sida aan maalmahaan la soconay Golmaal Again ayaa lacago kasoo xareeynayey Box Office-ka ,waxaana uu jilaaga filimkaan iyo Director-ka filimkaba ay sheegeen inuu yahay filim mar walba ay ku maqsuudsan yihiin.
Atooriyaal badan ayaa filimkaan kasoo muuqatay balse waxaa hormuud u ahaa Ajay Devgan oo ah aktarka filimka.
Golmaal Again ayaa lacag waali kasoo xareeyey gudaha India waxaana uu gaaray 200 Crore Club , waana arinta laga yaaban yahay ilaa iyo hada , waana filimkii ugu horeeyey ee Ajay Devgan sameeyo oo soo xareeya lacagahaan.
Aad ayuu dareen ahaa u faraxsanaa Director-ka filimkaan ee Rohit Shetty waxaana uu sheegay inuusan dareemin guushaan marka laga hadlo saameeynta uu sameeyey filimkiisa Golmaal Again oo ah filim taxane ah.
‘’Waan u mahadcelineynaa qof walba oo ka falceliyey gaar ahaan taageeriyaasha, waxaa uu ahaa filim saameeyn leh , sidoo kale filim mar walba aan ilaabidoonin muhiimada uu sameeyey , waa taxane Golmaal.
Director Rohit Shetty ayaa hada filimkaan u noqonaya filimkii 2aad ee rikoor nuucaan ah ka sameeya gudaha India , sababtoo ah waxaa ka horeeyey Shah Rukh Khan filimkiisa ee Chennai Express.